Ny jiro sy ny jiro Sony Bravia dia miodina sy mamono toa tsy kisendrasendra - MediaLight Bias Lighting
Ny jiro sy ny jiro miafina Sony Bravia dia mirehitra sy maty toa sendra sendra rehefa novonoina ny fahitalavitra.
Nahita an'ity pejy ity ianao satria ny jiro bias anao dia tsy tapaka rehefa maty ny Sony Bravia anao.
Ny vaovao tsara dia tsy misy maharatsy ny jiro fanavakavahanao.
Ny vaovao ratsy dia misy olana fantatra amin'ny fahitalavitra mbola tsy nisy (sy angamba tsy ho voavaha amin'ny Sony (rohy mankany GitHub).
11/14/2020 Vaovao farany!
Tianay ny misaotra ny mpanjifa malina, Josh J., izay niaina olana izay nahatonga ny fanamafisam-peo hitifitra isaky ny nivadika sy namono ny Bravia azy noho ny Bravia Standby Bug. Ny famerenana ireo dinika an-tserasera dia nahatonga azy hanamboatra izay, tsy fifankahazoana, mamaha ihany koa amin'ny ampahany ny Bravia Standby Bug amin'ny jiro bias. Vakio ity pejy fohy ity hahalalana ny bug ary fantaro izay hataon'ny fanamboarana.
Mety hitanao ity pejy ity satria rehefa ampiasanao ny haino aman-jery MediaLight anao avy amin'ny seranan-tsambo USB amin'ny Sony Bravia anao dia mirehitra sy maty tsy tapaka ireo jiro rehefa tapaka ny fahitalavitra. Manelingelina!
"Moa va tsy misy jiro marika hafa mifono amin'ny fahitalavitra?"
Tsia. Misy jiro hafa ihany no maty rehefa tsy misy herinaratra na very herinaratra. Izay no antenainao. Raha esorinao ny jiro dia maty izy. Ampidiro ary hiverina indray. Tsy manao n'inona n'inona ilay jiro. Mandrehitra fotsiny izany rehefa tafaverina amin'ny laoniny ny herinaratra.
Ny fahitalavitra Sony Bravia rehetra dia manao an'io.
Izany no antony iray mampiditra fanaraha-maso lavitra isaky ny MediaLight Mk2 Flex. Ny MediaLight koa dia efa nalamina ho ivon-toerana marani-tsaina maro sy any an-toerana lavitra ao anatin'izany ny tontolo iainana Logitech Harmony.
1) Mampiasà herinaratra avy any ivelany ary alaivo fandaharana ny lavitra ho any amin'ny lavitra na foibenay.
2) Na avelao ny MediaLight-nao amin'ny fahitalavitra, ovao ny maody fanaraha-maso RS232C ho "serial", ary vonoy ny jiro amin'ny alàlan'ny Remote MediaLight na hub marani-tsaina na remote universal.
Ireto ny torolàlana hanovana ny maody seranan-tsambo RS232C ho serial. Vantany vao vita dia hiverina indray ny fahitalavitra.
Mandehana any amin'ny menio Google miaraka amin'ny fampiharana hita maso rehetra. Afaka tonga eo ianao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra "Home" eo amin'ny faritra lavitra Bravia anao. Safidio ny safidy "setting" eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny efijery (ity menio ity dia mety hiova amin'ny fanavaozana ny fahitalavitra Android amin'ny ho avy)
Mikorisa mankany amin'ny fizarana "Network and Accessories" ao amin'ny Settings ary hahita zavatra iray antsoina hoe "fifehezana RS232C ianao." Safidio io.
Eo ambanin'ny faritra fanaraha-maso RS232C, safidio ny "Via port serial."
Hiverina ny fahitalavitrao aorian'ny fisafidiananao an'ity, ary raha vantany vao nanao an'io ianao dia ho foana ny jiro rehefa tapaka ny fahitalavitra. Azonao atao izao ny mamelona sy mamono ny jiro amin'ny alàlan'ny hub marani-tsaina, remote universal, na ny fanaraha-maso lavitra izay nampidirinay tamin'ny MediaLight Bias Lighting System anao.
Azafady mba mariho: ny fahitalavitra Android indraindray manao hetsika ao ambadika, toy ny fisintomana ny firmware sy ny reboot, ary azo inoana fa mbola mety ho faty ny jiro amin'ny fotoana tsy fahita firy, fa izy ireo kosa tsy hirehitra tsy tapaka ary tsy ho tapaka, tsy hampisy ny maizina mikipy ary hamaly hatrany ireo baiko lavitra.
Noho izany, ny dikan'izany dia hoe raha manana jiro fitongilanana izay misy remote ianao dia misy ny vahaolana amin'ny hadisoana miantehitra Bravia. 👍